I-China Flower Tea i-Rose Bud Ukukhiqiza neFektri | Bestop
Igama lesiShayina: mei gui hua lei
Igama lesiNgisi: I-Rose bud
Igama lesiLatin: URosa rugosa Thunb.
Sebenzisa Ingxenye: ihlumela
Umsebenzi oyinhloko: Ukulawula i-qi, ukuqeda ukudangala, ukuvumelanisa igazi nokuhlakaza i-Stasis
URose, igama lomuthi wendabuko waseChina, usetshenziselwa ikakhulukazi ukulawula i-qi, ukuqeda ukudangala nokusabalalisa i-stasis yegazi. Ukwelashwa kobuhlungu besibindi nasesiswini qi, i-fengbi entsha ende, i-hematemesis, i-hemoptysis, ukuya esikhathini okungajwayelekile, ibhande elibomvu nelimhlophe, uhudo, imastitis, ukuvuvukala nobuthi. Ikhiqizwa kakhulu eJiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Sichuan, Hebei nakwezinye izindawo. Izimbali ezomisiwe zi-hemispherical kancane noma zingajwayelekile, zi-1.5-2 cm ububanzi. Amacembe aminyene, amafushane futhi ayindilinga, abomvu ngoku-purplish abomvu futhi akhanyayo, anama-stamens aphuzi maphakathi ne-calyx eluhlaza engxenyeni engezansi. Isiqongo sihlukana sibe izingcezu ezi-5.
Kunesamukeli esandisiwe esimise okwenkanyezi ekugcineni okuphansi. Kukhanya futhi kupholile. Inomzimba ophelele futhi iyababa kancane. Izimbali ezinkulu, ezijiyile, ezibubende, ezigqamile nezinamakha amahle kakhulu.
Ukulawula i-qi, ukuqeda ukudangala, ukuvumelanisa igazi nokuhlakaza i-Stasis.
Ukwelashwa kobuhlungu besibindi nasesiswini qi, i-fengbi entsha ende, i-hematemesis, i-hemoptysis, ukuya esikhathini okungajwayelekile, ibhande elibomvu nelimhlophe, uhudo, imastitis, ukuvuvukala nobuthi.
Ukwelashwa kobuhlungu besibindi nasesisu qi: URose Yin Gan, insizakalo yetiye yeChong Tang 《《Ukuhlanganiswa Kwemithi YamaShayina
② Ukwelashwa kokuma kwesibindi kanye ne-hematemesis, izikhukhula ezingajwayelekile: ama-rose ama-pistils angama-300, owokuqala ukuvula, enyaweni yenhliziyo; Hlanganisa gazinga e-shayao ngamanzi amasha, susa izinsalela futhi gazinga futhi. Faka i-1 jin kashukela omhlophe wedwala bese uyithatha ngamanzi abilayo kungekudala noma kamuva. Vala ngokuqinile ibhodlela le-porcelain, ungadangali. Uma ulungisa ngokukhethekile ukuya esikhathini, ungasebenzisa ukhilimu onoshukela onsundu （《Ukhilimu we-rose we "feed crane Pavilion"
③ Ukwelashwa kokukhwehlela kwamaphaphu kanye ne-hematemesis: ijusi entsha ecubuziwe egxishwe ushukela wedwala 《《Quanzhou materia medica)
④ Phulukisa umoya omusha omude Bi: Rose (to net pistil, Yingan) imali emithathu, u-safflower, yonke i-Angelica imali ngayinye. Qeda emanzini uthathe imithamo eyisikhombisa yewayini elimnandi mirror 《Isibuko sotshani esiyikhulu)
Ukwelashwa kwekhanda lomoya wesibindi: ama-roses amane kuya kwamahlanu, amabhontshisi amathathu kuya kwamane, amanzi abilayo esikhundleni setiye 《《Quanzhou materia medica)
Ukwelashwa kwesifo sohudo: okomisiwe kwe-rose decoction 《《Ukuhlanganiswa kwe-Chinese Medicine
Ukwelashwa kwebele carbuncle ekuqaleni, ukucindezeleka kufanele kube yilokhu: rose iqhakaza, Yin yomile, yomile 30. Enhliziyweni, Chen Jiujian, ngemuva kokudla mirror 《Isibuko sotshani esiyikhulu)
Ukwelashwa kwe-mastitis: ama-roses ayisikhombisa nama-clove ayisikhombisa. Yithathe ngewayini elomile （《Ukuhlanganiswa Kwemithi YamaShayina
The Ekuqaleni kokwelashwa kokuvuvukala nobuthi: ama-roses angenanhliziyo, abhakwe ngemali yokugcina. Iwayini elihle ne-kimono （《Isibuko sotshani esiyikhulu)
Umlomo: i-decoction, i-1 ~ 2 qian; Cwilisa noma ubilise ukhilimu
Kusukela ngo-Ephreli kuya kuJuni, lapho amahlumela esezovuleka, athathwa ngamaqoqo futhi omiswe ngokushesha ngomlilo onensayo. Lapho usomisa, sakaza imbali ibe ungqimba oluncane, iCorolla iye phansi, yenze yome kuqala, bese ujika bese uyomisa okusele.
Ngenxa yokuthi ama-roses acebile ngamafutha angaguquki, amahlumela kufanele omiswe ngemuva kokukhiwa, noma omiswe ngomlilo omncane. Ungadaluli ilanga noma ubhake ngokushisa okuphezulu, ukuze ugweme iphunga le-volatilization futhi wehlise umphumela wokwelapha nokusebenzisa inani. Lapho usakaza noma usoma, iziqu zezimbali kufanele zisatshalaliswe ungqimba oluncane, zinganqwabelaniswa, ukuze kugwenywe isikhutha. Lapho usomiswa, i-corolla ingavulwa kuqala, bese iphenduka ngemuva kokumiswa, futhi yonke inqubo ingomiswa ngokushesha.
Langaphambilini Itiye Lembali LeMarigold Eliphilile
Olandelayo: Indabuko Yemithi YamaShayina YaseCyathula